Waxaan horay u sheegay marar badan ka hor – trong WordPress waa nidaamka maareynta nội dung ugu caansan. Sida laga soo xigtay dhowaan sahan, waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 50% ee bogagga ugu sareeya ee 1 triệu ee adduunka ku yaalla Nidaamka Maareynta Waxyaabaha.
Luqadda caadiga ah ee WordPress waa Ingiriis. Laakiin tiro wanaagsan Isticmaalayaasha internetka adduunka oo dhan kuma hadlaan Ingiriisi. Dadka aan Ingiriisiga ahayn ee Ingiriisiga sidoo kale waa kuwo la qiyaasi karo, WordPress-na cách iska indha-tiri kartaa aragti aan ingiriisi ku hadlin. WordPress oo ku qoran luuqado kale ayaa sidoo kale loo isticmaalaa si ballaaran.
0.1 Luqadaha ugu sareeya ee 10 ee loo isticmaalo trang web-yada WordPress:
2 Giải pháp Giải pháp cho người dùng Người dùng không biết tiếng Anh
Luqadaha ugu sareeya ee 10 ee loo isticmaalo trang web-yada WordPress:
Phá hủy 6.0%
Nhật Bản 5,0%
Tây Ban Nha 4,8%
Ba Lan 1,9%
Một phần của chúng tôi là một ah ee luqaddaas. WordPress wuxuu leeyahay awood ku dhisan dhisme si uu ula shaqeeyo luuqado badan.
1. Bảng điều khiển Laga soo bilaabo WordPress, furan Cài đặt> Guud.
Kaliya luuqado si buuxda loo turjumay ayaa ka muuqan doona menukan. Tani macnaheedu maahan trong luqadaha aan halkan ku liis garaynin. Wakhti yar ayaa loo baahan yahay ka hor intaadan ka dhigi karin shaqo WordPress ah oo ku qoran luqadaha aan ku jirin menu.
WordPress oo loogu Talagalay luuqado badan ayaa suurtogal ah trong lagu caawiyo tabaruceyaasha. Nidaamka gettext ee tarjumaadda halkan ayaa loo adeegsadaa. Waxaad haysataa liiska 2 ee luuqad kasta – feylasha (Faylka qaabka loo yaqaan Tệp đối tượng di động) iyo faylasha mo (Máy Faylka Nabadgelyada), oo leh jaantusyo iyo mo. Shabakada ugu weyn "thơ" waxaa loo isticmaalaa si loogu turjumo WordPress luqad cải xoăn. Faylasha "thơ" sápaa loo isticmaali karaa trong lagu hagaajiyo lana hagaajiyo tarjumaadda.
Waxaan u maleynayaa inaad garaneyso habkaaga macaamiisha FTP si aad u cusbooneysiiso boggaaga. Waxaad ku samayn kartaa isbeddelada deegaanka oo aad ku cusboonaysiin kartaa serverkaaga ama aad ku dari kartaa dardarta daruuriga ah si toos ah server-ka martigaliyahaaga ah.
Hadda fur furka WP-Nội dung ee kuugu jira WordPress (ku yaalla gudaha thư mục-ka chaweynaha). Oo halkan waa inaad ka heshaa Faylka Luqadda oo ku dar faylka mo ee faylkan. Hadda, waxaad gelisay feylashaada luqaddaada ee ku jira diiwaankaaga WordPress. Waa inaad barataa WordPress si aad u isticmaasho faylashaas.
Waxaad ku qortaa lambarkaaga waddanka iyo lambarkaaga luqadeed. Tusaale ahaan, Jarmalka oo ku hadla Thụy Sĩ, waxaad buuxin doontaa ‘de_CH’ oo leh luqadaada iyo kan waddanka.
Si aad u ogaato waddankaaga iyo lambarka luuqadda, waxaad tixraaci kartaa buugga gettext. Markaad ku darto tan, keydso faylka una gudbiso faylka roota WordPress. WordPress waa trong isla markiiba bilaabaa muujinta luqadda aad dooratay.
Giải pháp Giải pháp cho người dùng Người dùng không biết tiếng Anh
Haddii ay jirto sabab kasta, waxaad ka heli kartaa wax kasta oo kor ku xusan adiga, waxaad isku dayi kartaa plugin loo yaqaan Dashboardka caadiga ah. Isticmaalidda plugin-ka, waxaad dooran kartaa luqad kasta oo maamula 3.
Goobaha asxaabta ee người dùng
Keenaya plugin này, waxaad sidoo kale soo bixi kartaa faylasha loo baahan yahay in aad rakibo iyo isla markiiba u isticmaali trên quản trị viên bogagga.
Mid ka mid ah faa’iidada leh plugin-ka waxa tinyye in aad ku heli kartid luuqado badan boggagaaga. Tani waxay noqon kartaa wax qabow fiican haddii aad leedahay qorayaal badan oo ku yaal goobtaada. Waxaad markaas u ogolaan kartaa inay ku qoraan luqadooda hooyo. Qalabkan wuxuu ka shaqeeyaa 2.7 phiên bản 3.61 ilaa 2 (lama cusbooneysiinin in ka badan sanado XNUMX) wuxuuna u baahan yahay qoritaan si aad u hesho serverkaaga, taas ooan.
Hadda, dhammaan faylashaasi waxay muujinayaan oo keliya goobta maamulka ee boggaaga internetka ee luqaddaada. Wixii mawduucyo iyo fiilooyin, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay tarjumaad dheeraad ah waxaadna qiyaasi kartaa sida ay u adagtahay tani, haddii aad soo ogolow Xuquuqda turjubaanka priceix ayaa noqon doona hawl dhab ah. Mawduucyada mặc định mặc định WordPress waxay la yimaadaan taageeradan, laakiin ma heli kartid mawduucyada kale ee saddexaad. Mawduucyada dheeraadka ah ee caymiska iyo xitaa qaar ka mid ah kuwa bilaashka ah ee ka yimaada dhinacyada saddexaad waxay u muuqdaan in ay leeyihiin habka RTL oo.
Waxaa jira waxyaalo kale oo leh hawlo kala duwan. Somali WordPress Admin waxay u oggolaanaysaa trong dashboardka lagu soo bandhigo Ingiriisi, halka inta kale ee uu isticmaali karo luqad kale. Tani waa muuqaal sáp ku ool ah oo loogu Talagalay horumarka goobta ee dambe, dhammaadka hore ee ku yaala luqada degaanka.
Iyadoo WordPress Luqad, waxaad ku qasban tahay inaad doorato luuqad aad rabtid oo wax walba si toos ah ayaa isbeddelaya. D cấm! Waa maxay xayiraadda? Looma cusbooneysiin doono, laakiin WordPress ayaa sheegta trong dhamaan sifooyinkaasi ay ku jiraan Plugin WPML, oo ​​loo isticmaalo dhisidda iyo kobcinta goobo luqado badan leh.